HXTUL 205L वायवीय लिफ्ट मिक्सर - ढक्कनको साथ - चीन HXTUL 205L वायवीय लिफ्ट मिक्सर - ढकनी आपूर्तिकर्ता संग,कारखाना -HX
एयर सामान उचाल्ने यंत्र
एयर माथि उठाना
गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली
घर » उत्पादन » एयर मिक्सर
HXTUL 205L वायवीय लिफ्ट मिक्सर - ढक्कनको साथ
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोसडाउनलोड
अघिल्लो : HXTB फिक्स्ड प्रकार वायवीय मिक्सर
अर्को : HXTUSD डबल - लिफ्ट उठाउने र न्युमेटिक मिक्सर सार्दै
· 250l खुला ब्यारेल पेन्ट कोटिंग्सका लागि लागू, सौन्दर्य प्रसाधन र अन्य रासायनिक तरल पदार्थ मिश्रण, मिक्सन र फैलाव
· यो उठाउन र कम गर्न सकिन्छ, र तेस्रो गियर म्यानुअल्ली लिफ्ट गर्नका लागि बीचमा कम माथि नियन्त्रण गरिन्छ। मजबूत कन्ट्याभ च्यानल कडा पा whe्ग्रा बाट बनेको छ।, यसलाई सार्न सजिलो र यातायात सुरक्षित गर्न.
· मानक उठाने उचाई: उठाने पछि, प्ररितकर्ता भूमिबाट mm ०० मिमी टाढा छ (ग्राहकको ब्यारेल आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ).
1. वायवीय मिक्सर चरणविहीन विनियमित गर्न सकिन्छ.
2. वायवीय मिक्सर अगाडि दिशामा उल्टाउन सक्छ.
3. वायमेटिक मिक्सरको काम गर्ने वातावरण कम्पनले असर गर्दैन, उच्च तापक्रम, विद्युत चुम्बकीय, विकिरण, आदि.
4. वायवीय मोटर न्युमेटिक मिक्सरसँग मिलेको छ ओभरलोड सुरक्षा समारोह छ र अधिक भारको कारण खराबी हुँदैन.
5.न्युमेटिक मिक्सरसँग उच्च सुरू गर्ने टोक़ छ र लोडको साथ सीधा सुरू गर्न सकिन्छ. सुरु र रोक्नुहोस् द्रुत छन्, र लोडबाट सुरू गर्न सकिन्छ. यसले विद्युत् मिक्सरहरू जस्ता अतिभारित जलिरहेका मेशिनहरूको प्रयोगलाई असर गर्दैन.
6. वायमेटिक मिक्सर चलाउन र मद्दत गर्न सजिलो छ.
वायवीय मिक्सरहरू विस्फोट प्रूफ आवश्यकताको साथ उद्योगहरूमा मुख्यतया प्रयोग गरिन्छ, जस्तै पेट्रोलियम, रासायनिक, paint, रंग, काठको काम, खाना, दैनिक रसायनिक र अन्य ज्वलनशील, विस्फोटक, धूलो, गह्रुं भारी, भिजेको र अन्य कार्यस्थलहरू.
मिक्सरको मर्मत र निरीक्षणले सेवा जीवन र प्रदर्शनमा ठूलो प्रभाव पार्छ. क्रममा प्रदर्शन पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न, सफा र सुक्खा कम्प्रेस हावा प्रयोग गर्नुपर्नेछ. वायु कम्प्रेसरमा पाइपिंगमा खिया र नमी फिल्टर गर्नुपर्नेछ र प्रयोग गर्नु अघि हटाउनुपर्नेछ. फिल्टरहरू वा उत्तम ट्रिपलट्स स्थापना गर्नुहोस्. कृपया यसलाई pressure-8 केजी / सेमी २ को हावाको चापको दायरा अन्तर्गत प्रयोग गर्नुहोस्. यदि उच्च दबाव यो दबाव दायरा भन्दा बढी छ, यसले खराबीलाई निम्त्याउँछ. यदि दबाव अपर्याप्त छ, प्रदर्शन exerted गर्न सक्षम हुने छैन. क्रममा स्थिर प्रदर्शन कायम गर्न, यो वायव तरिकाले आपूर्ति गर्नु पर्छ. उपकरण तेल, अपर्याप्त तेल आपूर्तिले उपकरणलाई तातो पार्नेछ, लाउने कारण, अपर्याप्त उर्जा, प्रदर्शन गिरावट, आदि, उपकरण जीवन को धेरै असर गरीरहेको छ.
कुनै लोड गति छैन
उत्तेजक शाफ्ट व्यास (मिमी)
लागू हुने चिसोपन
250L ब्यारेल आकार
8"* २ पीसी
10"* २ पीसी
12"* २ पीसी
कम्पनी / संगठन:
फलक एयर मोटर
Oilless एयर मोटर
स्टेनलेस स्टील एयर मोटर
एयर गियर मोटर
पिस्टन एयर मोटर
पिस्टन एयर सामान उचाल्ने यंत्र
फलक एयर सामान उचाल्ने यंत्र
सामाजिक मिडियामा अमेरिकी भेट्टाउन
प्रतिलिपि अधिकार © 2017 Rudong Hongxin मशीनरी कं, लिमिटेड. Meeall द्वारा समर्थन.